Mpandika teny, mpandika teny 58 maimaimpoana amin'ny fotoana voafetra | Vaovao IPhone
Mpandika teny, mpandika teny 58 afaka amin'ny fotoana voafetra
Toy ny fitsipika ankapobeny, raha miresaka mpandika teny ho an'ny rindranasa isika, ny ankamaroantsika dia mieritreritra mandrakariva ny Google Translator, ny mpandika teny tsara indrindra izay azo alaina ihany koa ary mampiasa maimaim-poana tanteraka. Na eo aza izany, ao amin'ny App Store isika dia afaka mahita fampiharana marobe izay mamela antsika handika lahatsoratra haingana sy mora. Google Translator dia ampiasaina bebe kokoa handikana teny tokana, na dia mety hiasa miaraka amin'ny soratra aza izy io fa ny valiny izay tsy ateriny amin'ny sehatra interface-interface dia mamela betsaka ny faniriana, tsy maintsy lazaina, na dia ao ambadik'izany aza i Google. Ny mpandika teny dia mamela antsika handika lahatsoratra eo anelanelan'ny fiteny 58 samy hafa miaraka amina interface azo ampiasaina ary azo alaina maimaim-poana izao. Ny vidiny mahazatra dia 5,99 euro.
Iray amin'ireo tombony atolotry ny fampiharana Mpandika teny amintsika, raha ampitahaina amin'ny an'ny Google, ny interface izay natao handikana lahatsoratra fa tsy teny tsirairay. Amin'ny mpandika teny dia tsy ilaina ny manoratra na mametaka ny lahatsoratra, na dia azo atao koa aza izany, fa afaka isika alefaso amin'ny fampiharana ilay lahatsoratra tianay adika ka mamantatra azy ho azy sy mandika azy ho azy. Fomba haingana sy mora hifandraisana amin'ireo olona tsy mahay fiteny iray.
Raha vantany vao nandika ny lahatsoratra izahay dia afaka mizara azy amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy, amin'ny alàlan'ny mailaka na amin'ny hafatra an-tsoratra. Ho fanampin'izany, mamela antsika ihany koa handika ny lahatsoratra hametahana azy amin'ny rindrambaiko hafa. Anisan'ireo fiteny 58 tohanan'ity fampiharana ity no hitantsika Arabo, boligaria, sinoa, sinoa nentin-drazana, danoà, holandey, anglisy, frantsay, alemanina, grika, Islandy, Irlanda, Italiana, Japoney, Koreana, azafady, poloney, portogey, romana, rosiana, espaniola. Soedoà, Thai, Tiorka, Welsh, Armeniana, Latina ...
mpandika teny dia mifanaraka amin'ny iOS 8 mandroso ary mifanaraka amin'ny iPhone ihany Satria mila fifandraisana Internet handikana ireo lahatsoratra izy, dia mampiasa môtô fanekena feo avy any Nuance, orinasa iray efa an-tsena an-taonany maro koa handika ny feo ho fanoratana.
Mpandika teny !!€ 10,99
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Mpandika teny, mpandika teny 58 afaka amin'ny fotoana voafetra
Mpandika teny espaniola dia hoy izy:
Vao avy nanandrana aho ary mandeha tsara, misaotra tamin'ny fampahalalana
Valiny ho an'ny mpandika teny espaniola grika
Pokémon Duel dia eto, ny lalao Pokémon vaovao ho an'ny iOS
iOS 10.3 dia mety ho tonga amin'ny kitendry mitsingevana ho an'ny iPad